Nisho Noocyada galmada 07.08.2021 07.08.2021 Comments
Dhalmo galmada ee noocyada sare iyo hoose ee flora
Baro ku saabsan sifooyinka jinsiga iyo xanuunada
Noocyada kala duwan ee jinsiga
Share on Facebook Share on Twitter Dhammaan noocyada galmada galmada, galmada dabada ayaa ah midka ugu qiimo jaban. In kasta oo xaqiiqda ah in mid ka mid ah afartii haweenba midkood uu u nugul yahay galmada , haddana badanaa weli waa tabo. Haween badani ma rabaan inay tijaabiyaan tan sababo badan oo ah khuraafaadka iyo khaldanaanta, iyo sidoo kale in la tixgeliyo bayaannada kufsiga ee dadka ku saabsan galmada dabada, intooda badan oo aan wax haysan wax run ah.
Marka aad iska xishoodo oo aad barato farsamada saxda ah, waxaad si sahlan u fahmi doontaa sababta galmada firsadu ay aad ugu raaxaysan karto. Dabada waxaa ka buuxsama dareenka dareenka waana mid ka mid ah meelaha ugu xasaasiga badan - maskaxda iyo siyaabo kale oo loo kicin karo waxay keeni kartaa farxad dhab ah. Xaqiiqadu waxay tahay in haweenka qaar ay ku gaaraan orgasm kaliya oo leh galmada. Halkan waxaa ah jawaabaha qaladaadka ugu caansan ee ku saabsan raaxada.
Anus waa wasakh Horaantii caruurnimadeena waxaa la baray in futada ay wasakh tahay oo aan la taaban karin. Cunnooyinka fara badan oo taxaddar leh ee gacmaha ka dib markii ay shilkani la xiriiraan meeshan - taasina waxay ahayd shardi. Waxaa laga yaabaa in aad maqashay aragtidaada ku saabsan ferjiga. Laakiin cidina kuma doodi doonto in kicinta qaybaha qeybaha jirka, dabcan, ay keeni karaan dareemo badan oo wanaagsan.
Xaqiiqdii, nadaafada joogtada ah ee joogtada ah, dabada ayaa nadiif ah sida qayb kasta oo kamid ah jirkaaga. Ma aha mid bakteeriya dabiiciga ah oo waa mid aad u nadiif ah, tusaale ahaan, xuubka afka. Galmada dabeecada - way xanuunto Galmada afka waa in aysan aheyn mid xanuun leh, laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo ka mid ah bayaannada dadka ee ku saabsan galmada dabada. Xasuuso: haddii ay xanuunto, markaa waxaad samaynaysaa wax qaldan.
Haddii aad baranayso farsamada saxda ah, ka hor inta aanad bilaabin tijaabinta, waxaad arki doontaa sida fiican ee ay tahay. Marka la eego, dukaamada khaaska ah tiro badan oo ah jilciya gaar ah iyo macluumaad ku filan ayaa la heli karaa: futada waa tuubo qiyaastii 3.
Mid ka mid ah giraangirta shukumaanka dibadda ayaa hoos yimaada gacantaada. Qalabka kale gudaha sphincter wuxuu si toos ah ugu shaqeeyaa marka uu wax galo futada. Raaxo-siinta shishe-siinta dibedda ayaa sahlani doonta galmada si sahlan oo aad ufiican.
Duufkaagu ma soo saaro dheecaankiisa caadiga ah, sidaa darteed isticmaal jilciyeyaasha biyaha ku salaysan ee madadaalo badan. Galmada dabada waxay u xun tahay caafimaadka Dumar badan ayaa aaminsan in galmada dabada ay sababto boogo ama dillaac of futada.
Qaar ka mid ah xitaa way ka baqayaan in ayan awoodi karin inay musqusha u lugeeyaan si caadi ah ayna ku qaataan noloshooda intiisa kale ee dharka. Dhab ahaan, galmada dabiiciga ah ee saxda ah oo macquul ah ma keeni karto dhaawacyo ku yimaada futada ama malawadkaaga. Iyo haddii lammaanahaaga uusan qabin caabuqyo loo kala qaado galmada, shahwadiisu maaha mid waxyeello u leh malawadka.
Haddii aadan hubin in lamaanahaagu uu qabo cudur, waxaa habboon in la isticmaalo cinjirka ka sameysan polyurethane ama cinjirka xilliga galmada. Iska ilaali kondhom leh shahwo - taasi waxay sababi kartaa cuncun futada iyo malawadka! Galmada cirridku waa qallooc iyo cilad aan caadi ahayn Galmada dabeeciga ah waxaa lagu aqbalaa dhaqanka galmada qarniyo badan. Dhaqannada qaarkood, dumarku waxay ku heshiiyeen inay galmada la galaan lamaanahooda labadooda si ay u ilaaliyaan bikradnimadooda. Waa inaad go'aansatid naftaada dabiiciga ah iyo waxa aan ahayn.
Haddii aad dareento inaad ka xun tahay fekerka galmada galmada - ha sameynin! Kaliya waxaad go'aamin kartaa nooca jinsiga ah ee aad sameyn karto. Iyo bayaannada dadka ku jira xaaladdan gebi ahaanba waxba kuma laha. Galmada afka ayaa ku farxaysa oo keliya khaniisiinta Wakhti dheer waxaa dhab ahaan loo tixgeliyey ficil ahaan qaniisyo qaniiseed, inkastoo ay isticmaaleen lamaane heterosexual ah. Waa hab kale oo loogu talagalay farxad galmo oo aan lahayn xiriir la leh jihada galmada.
Dhammaanba, khaniisiinta waxay leeyihiin qaab dhismeed oo isku mid ah dadka kale oo dhan. Qoraal noocan oo kale ah ma aha mid macno leh. Ogow habdhiska neeftaada Si aad si fiican u fahanto galmada dabada, waxaad u baahan tahay inaad wax dheeraad ah ka ogaatid anatomy ee futada iyo malawadkaaga.
Isticmaal muraayad iyo iftiin fiican, fiiri dabadaada. Inkasta oo ay u muuqato mid yar oo aad u cufan, waxay awood u leedahay in ay ku filan tahay - tusaale ahaan, faraha, vibrators ama guska wax kasta. Waxaad ogaan doontaa in maqaarkaaga agagaarka futada uu mugdi yahay, oo qarxan, oo aan lahayn timo, dhidid iyo qanjidhada xayawaanka. Sida hoosta hoosta, futada waxaa ku jira unugyo badan oo xididada dareemayaasha, waana mid aad u nugul in la taabto lana fidiyo.
Qeybta sare ee futada waa meesha ka soo baxda malawadka. Xaqiiqdii, maaha sidaas toos ah. Xuubku wuxuu leeyahay koritaankiisa iyo godadkiisa, qof kastaa wuu ka duwan yahay. Sababtoo ah unugyada malawadka ayaa ah jilicsan, walxo fiiqan ama xoog miir ah ayaa si fudud u keeni kara dhaawicooda. Inkasta oo futada aan sida xasaasiga ah u ahaan karin siilka, haweenka qaarkood waxay dareemaan farxad aad u xoog badan oo dhacda inta lagu jiro galmada dabada.
Xiriirka , Galmada Noocyada kala duwan ee jinsiga Articles ku saabsan galmada ma aha mid ku filan, maxaa yeelay, waa mid ka mid ah mawduucyo yar oo xiiso gabi ahaanba qof kasta. Ka dib oo dhan, galmada - waa qayb muhiim ah oo nolosha qof kasta ee haddaan lagu darin kuwa siiyey nidar of Celibacy. Aynu isku day in aad si kooban iyo waxaa laga heli karaa haddii aadan ka fiirsan oo dhan cayn kasta oo galmo, ugu yaraan qaar ka mid ah.
Dabcan, ugu badan yahay galmada siilka, taas oo guska oo la geliyo siilka. In qaabka this, taas oo ah fal galmo, waxa macno ah ma. Second liiska waa galmada afka, micnahoodu yahay salaaxida taranka bushimaha wehelkaaga iyo af. Noocyada galmada afka - dharbaaxo naag fondles nin Dick iyo cunnilingus Lab Raalli ahaanshaha qof dumar ah. Haddii aadan la galmooda, waxay leeyihiin taageero ka: www.
Xaaladdan oo kale, xubnaha taranka xoqin oo dhan cayn kasta oo ah meelaha iyo waxyaabaha walax, oo ay ku jiraan qalabka galmada. Ka sii baxsan noocyada galmada sida dabada iyo farsamo. Ta hore waxa weeye hordhac guska galay futada, iyo tan labaad oo ku lug leedahay, marka lagu daro xubnaha taranka, isticmaalka waxyaabaha kala duwan iyo qalabka inta badan ma loogu talagalay kulan galmada si ay u gaaraan ku qanacsan tahay ugu badnaan.
Taageerayaasha of galmo xad dhaaf ah meelaha aan caadi ahayn weyn ayaan ugu faraxsanahay in jacaylka ka dhigi inay halis ku ah nolosha, ama duruufaha adrenaline oo ku saabsan in ay jebiyaan soo baxay waa. Tan la'aanteed, ma ay awoodi doonaan in ay la kulmaan dhamaystiran qanacsan. Waxaa sidoo kale jira noocyo kala duwan kuwa caadiga ah ee galmada la qalloociyaa. Waxaa ka mid ah khaniisnimada xiriirka isku jinsiga ah , pedophilia jiidashada galmada caruurta , bestiality galmo la xoolaha , fisting sal-galay futada siilka ama walxaha shisheeye weyn BDSM BDSM , galmo koox ka mid ah saddex iyo ka qaybgalayaasha ka badan galmo , necrophilia jiidashada in maydka , partenofiliya rabitaankiisa gabdhood oo bikrado ah intsestofiliya damaca qaraabada, xubnaha qoyska , habro jiidatay dadka da'da sare.
Dabcan, sida xaqiiqada ah kuwanu galmada noocyada kale oo badan, boqolaal iyaga ka mid ah, oo ay taxdo dhamaan suurto gal ahayn. Waxaa xusid mudan in fiiro gaar ah u noocyada galmada waxaa loo tixgeliyaa aan caadi ahayn iyo xitaa xiiso leh dareenka. Tusaale ahaan, trihofilichesky galmada marka hal rafiiq ku farxaa ku xoqeen ayay xubnaha taranka ee timaha labaad.
No galmada yar Xadgudbayaasha iyo sanka, markii ninku guska guuro weheliyaan baalasheeda sanka of xaaskiisa. Intrafemolyarny - ogolaanaya nin inuu sii ahaado qanacsan marka uu guska waxaa soo galaysa bowdyaha dhaddig. Haddii aad rabto in aad kala duwanaanshaha, waxaad isku dayi kartaa noocyada soo socda ee galmada: Naasaha guska taabanayo u dhexeeya iyada naasaha dumarka , glyutealny reciprocating mooshin xubin ka dhexeeya lammaanaha dabada, laakiin aan hordhaca ah ee futada , interpedalny ama intrabialny jirka si tartiib ah isugu majuujin cagaha qof dumar ah ama inta u dhaxaysa ay weylaha , poplitealny xubin ku yaalla dimple popliteal ah.
Sida xaqiiqada ah wax ku soo dejin doono in aad xiriir ka sii shucuur wanaagsan iyo dareenka. Similar articles.
Dadka aan dareemayn rabitaan galmo, inkasta oo ay qadarin karaan jilicsanaanta kuwa kale. Mid ka mid ah noocyada istiraatiijiga ah ee jihaynta, maadaama ay dadku dareemayaan farxad u leh awoodda aqooneed ee lamaanaha. By habka, waxaa jira dumar badan oo sapiosexuals ka ragga. Calaamadaha jihada jinsiga ee haweenka iyo ragga - jiidashada dadka jinsiga ah iyo xitaa dadka bedelaya.
Panseksualov waxay xiiseynayaan tayada shakhsi ahaaneed ee shayga iyo dareenka uu dareemayo marka uu la xiriiro. Wixii iyaga, ruuxa ruuxi ah waa ka muhiimsan yahay aqoonsiga galmada. Dadka qaba jihada galmada ee noocaas ah waxay kaliya xiiseynayaan galmada, laakiin dareenka iyo dareenka iyaga maaha mid muhiim ah.
Xaaladaha intooda badan, waxay si fudud u xalliyaan iskaashiga rasmiga ah, sababtoo ah kuma xirna lifaaqyada. Habdhaqanka Galmada Qurxinta Haddii qofku dareemo rabitaan jinsi gaar ah oo loogu talagalay xubnaha jinsiga kale, waxaa loo tixgeliyaa in uu leeyahay jiheeye heterosexual ah. Noocani waa mid madaxbannaan. Hanuuninta galmada caadiga ah, oo loo tixgelinayo sax.
Tani waxaa lagu sharaxay xaqiiqda ah in dunida xayawaanka ah ee khaniisnimada ee foomka saafi ah ayaa dhif ah la arko, oo iyaga ku jira shakhsiyaadka hal jinsi inta badan kiisaska ma dareemayaan soo jiidasho midba midka kale, laakiin, liddi ku ah, waxay muujiyaan gardarrada ee halganka lammaane wanaagsan.
Hanuuninta galmada aan caadiga ahayn Noocida noocan ah waxaa ka mid ah homo- iyo bisexuality. Xaaladda kowaad, dadka waxaa soo jiidanaya shakhsiyaadka jinsigooda, iyo tan labaad - wakiilada labada jinsi. Markii hore waxaa la rumeeysan yahay in dadka leh jiheeyn galmo aan dhaqameed lahayn ay leeyihiin khalkhal nafsadeed. Bilawgii qarnigii 20aad, cilmi-nafsiga Havelock Ellis ayaa cadeeyay in khaniisnimadu ay tahay mid caadi ah, sidaa daraadeed taasi waa mid ka mid ah fursadaha caadiga ah.
Samaynta jihada galmada Waxaa jira noocyo kala duwan oo ah sida jiheyntu u dhisan tahay, iyo qaar badan oo ka mid ah ay khalad yihiin.
Cilmi-baadhayaashu waxay caddeeyeen in hanuuninta galmada aysan isbeddeli karin sababtoo ah dabeecada khaldan ee waalidka, naxdinta shucuurta iyo wixii la mid ah. Si loo fahmo waxa go'aaminaya jiheynta galmada, daraasad ayaa lagu sameeyay sameynta uur-jiifka ilmo-galeenka. Cilmi-baadhayaashu waxay aaminsan yihiin in toddobaad ka dib rimidda, tiro badan oo hormoonno ah ayaa gala embriyaha, taas oo muhiim u ah sameynta sifooyinka jinsiga iyo dhismaha maskaxda.
Qeybta koowaad ee ka mid ah waxay u socotaa horumarinta sifooyinka jinsiga, iyo wax kasta oo sii wata - oo ah qaabka maskaxda.
Haddii qaddarka hoormoonka uusan ku filnayn, markaa waxaa jira isbeddel xagga jihada galmada. Sababaha ugu waaweyn ee hormoon la'aanta hormoonka: diiqadajirada iyo qaadashada dawooyinka qaarkood 2dii bilood ee hore.
Sidee loo ogaan karaa jiheynta galmada? Saynisyahanno iyo cilmi-nafsiyaadka Mareykanka ayaa cilmi baaris ku sameeyey natiijooyin cajiib ah. Qeexitaanka jihada galmada waxaa lagu samayn karaa dhererka faraha gacanta.
Natiijo ahaan, natiijooyinka soo socda ayaa la sameeyay: Lesbians - Farta farta ayaa ka dheer tahay farta muujinta.
Gabdhaha leh hanuuninta heterosexual - farta aan la magacaabin iyo farta indhahana waxay leedahay dherer siman. Gays - farta calaamaduhu way ka dheer tahay farta aan la magacaabin. Wiilasha leh jiheeyn heterogene ah - dhererka farta cirbaha waa ka dheer yahay farta muujinta.
Qashinka jihada galmada SannadkiiFritz Klein, si ay si sax ah u go'aamiso una cabbirto jihada dadka, waxay soo jeedisay qiyaas saddex-cabbir ah oo ku xisaabtamaysa waayo-aragnimada jinsiga iyo khiyaaliga saddexda jeer: waqtigan, mustaqbalka iyo wixii la soo dhaafay. Kajirinta jinsiga ee Klein wuxuu kaa caawinayaa inaad aragto isbedelka galmada ee nolosha inta lagu jiro. Mid kasta oo ka mid ah sadexda tiir ee waa in lagu buuxiyaa qiyamka laga bilaabo 1 illaa 7 oo ah halbeeg kasta.
Xaaladdan oo kale, u shaqeeyo laba fiyuuska-unuglaha. In wakiilada multicellular gametangia waxaa ka mid ah in aadan ka duwan unugyada kale ama gametangia sameeyay la kala duwanaanshaha morphological tusaale ahaan, ektokarpusa. Waayo, kuwo badan algae isogamous geterotallizm sifo qeybinta galmada hidaha iyo nafeedba.
Haddaba waxaa jira dad isuga ee gametes physiologically kala duwan. Waayo, algae qaar ka mid ah waxaa lagu gartaa conjugation ah: waxaa jira "qarqinaya" cell protoplast a in kale. Xarunta bezzhgutikovoy gamete dumar ah uusayt iyo flagella sida caadiga ah lab yar manida waa oogamy. Unugyada labka iyo dheddiga ee gologamnyh, heterogamic, flora isogamous oo ugu oogamnyh waa la fuliyay in biyaha. Tiro ka mid ah hawsha midaynta dhirta oogamnyh dhacdaa uugoniya gametangia dumar ah.
Waxay si firfircoon uga dhaqaaqin shahwada sii daayay oo biyaha ku shubaa. Waxqabadka muuqata in ay sabab u tahay chemotaxis. Sayidka spermatsii algae cas algae cas waxaa lagu dhaqaaqay by socodka biyaha - lahaayeen. Si kastaba ha ahaatee, unugyada labka iyo dheddiga qaadataa meel ay leeyihiin siyaabo kala duwan. Waayo, dhirta sare waa gametangia multicellular caadiga ah - archegonium dumar iyo antheridia lab. Lakabka sare ee unugyada xubnaha taranka waa sterile.
In archegonia ugxanta sameeyay mid ka mid ah spermatozoa antheridia loo sameeyay sida caadiga ah in xaddiyo sare.
thoughts on “Noocyada galmada”
13.08.2021 at 23:46
Maukasa on Noocyada galmada
Copyright © 2021 Noocyada galmada. Powered by WordPress. Theme: Accelerate by ThemeGrill.